सुविना गिरी मृत्य प्रकरण : झुण्डिएको नभई घाँटी थिचेर हत्या ! « Sagarmatha Daily News
सुविना गिरी मृत्य प्रकरण : झुण्डिएको नभई घाँटी थिचेर हत्या !
रूपन्देही । गत जेठ ३० गते तिलोत्तमा नगरपालिका–६ मा मृतावस्थामा फेला परेकी २५ वर्षीय सुविना गिरीको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
“शव परीक्षण रिपोर्टमा झुण्डिएर नभई ‘नेक प्रेसर’का कारण मृत्यु भएको भन्ने आयो त्यसैले घटना शङ्कास्पद छ, अब आरोपितबाट पनि धेरै कुरा खुल्छ,” प्रमुख केसीले भने ।
सुविनाका श्रीमान् सञ्जयले सुविनालाई तिलोत्तमा–६ पश्चिम पहुनीमा रहेको मिलन फेमिली रेस्टुरेन्टको कोठामा जेठ ३१ गते राति १ बजे झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारी सुविनालाई क्रिमसन अस्पताल पुर्‍याएपछि आफन्तलाई खबर गरेका थिए । सुविनालाई अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले पहिले नै मृत्यु भएको बताएका थिए ।
यता सुविनाको घाँटी थिचेर मृत्यु भएको पुष्टि भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्न सुविनाका आफन्तले माग गरेका छन् । सुविनाका बाबु नरु गिरीले शव परीक्षण रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै न्याय दिन आग्रह गरे । “शव परीक्षण रिपोर्टले घाँटी थिचेर हत्या भएपछि झुण्ड्याइएको प्रष्ट पारेको छ, दोषीलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने ।
मध्यरातमा आफ्नै आगाडि झुण्डिएको र आफैँले अस्पताल ल्याएको दाबी गरेका सुविनाका पति सञ्जयको बयानसमेत नमिलेको देखिएकाले घटना रहस्यमय भएको प्रहरीको भनाइ छ । गत जेठ ३० गते राति घरदेखि केही परको होटलमा झगडा भएपछि सोही होटलको कोठामा सुविना एक्कासी झुण्डिएको सञ्जयको बयान थियो । झुण्डिएको हो वा होइन भन्नेमै आशङ्का रहेका बेलामा आएको शव परीक्षण रिपोर्टले भने झुण्डिएर मृत्यु नभएको यकिन गरिदिएको छ । “घाँटीमा हातले थिचेको छ, टाउकामा पनि चोट देखिएको त्यसैले स्पष्ट भन्ने आधार छैन,” डा. आहना श्रेष्ठले भने ।
सुविनाकी फूपू छमा गिरीले सुरुमै सूचना दिने बेलादेखि नै पति (सञ्जय) र परिवार तथा नातेदारको भूमिका शङ्कास्पद लागेको बतायन् । झुण्डिएर मरेको भन्ने कुरा शव परीक्षणमा पुष्टि नभएपछि पतिले नै परिवार तथा नातेदारको सहयोगमा कर्तव्य गरेर मारेको आशङ्का रहेकाले प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको सुविनाका काका निमु गिरी बताउँछन् ।
सडक मर्मतमा लापरवाही गरेको भन्दै म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ नयाँबजारका स्थानीयले हिलो सडकमा धान रोपेका छन्
व्यावसायिक अकबरे (डल्ले) खुसार्नी खेती भोजपुरका कृषकको रोजाइमा परेको छ। बजारमा माग राम्रो भएकाले खुसार्नी
तीजमा छाडा गीत ल्याए राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले कारबाही गर्ने!
काठमाडौँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले नजिकिँदै गरेको तीजको लागि सीमा निर्धारण गरेको छ।